Ciidamada Itoobiya ee Dhawaan Galay Gabalka Hiiraan ayaa Maanta sii Daayay Shan Dhalinyara Somali ah oo Dhawaan ay Gacanta ku Dhigeen – Rasaasa News
May 27, 2009 Somali Ogaden
Beledweyn – Somaliya [May 27, 2009] – Ciidamada Itobiya ee dhawaan galay gudaha gobolka Hiiraan Somaliya, ayaa bilaabay dhaq dhaq ay ku baarayaan tuulooyinka gobolkaas iyaga oo sida ay sheegeen halkaa ka baadi goobaya, dhalinyaro la sheegey in ay u soo tallaabeen dhinaca Hiiraan kuwaas oo ka tirsan dagaalyahanada ONLF.
Ciidamadan Itoobiyanka ah oo gaadhay tuulada Deefoow oo ilaa dhowr kiilo mitir u jirta magaalda Beled weeyne kuwaas oo sheegey in ay ku raad joogeen Dhallinyaro ONLF ah kuwaas oo ka dagaalama gudaha Itobiya.
Ciidamadaas ayaa markii ay gaareen degankaas deefoow waxa ay halkaa ka soo qabteen illaa shan dhalinyaro Soomaaliyed ah oo muddo ay ku hayeen degaanka kala bayrka.
Ciidamada Itoobiyanka ayaa kulamo la qaatay Odayaasha dhaqanka ee degaanka Deefoow kuwaasoo ka codsaday in odayaashu ay la shaqeeyaan isla markaana ay ilaalo ka qabtaan Buunddo halkaa ku taala si ayan uga soo tallaabin dagaalyahanada ay ku sheegeen ONLF.
Ciidamada ayaa ku hanjabay haddii aan buundadaa la ilaalin in gebi ahaanba ay bur burin doonaan buundaas taas oo ay tuuladaasu go;doon galayso.
Dadaal badan oo ay sameeyeen odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan ayaa maanta lagu guuleystey in laga sii daayo dhalinyaradii ay gacanta ku hayeen iyagoona dib ugu laabtay degaanadoodii waa dhalinyaradiiyee.
Si kasta ha ahaatee Ciidamada Itoobiyaanka ayaa marka ay soo gaaraan gobolkaas waxa ay u dhaqmaan si wanaagsanayn kuwaas oo xaniba gaadiidka isla markaana mararka qaar lacago baad ah ka qaata gaadiidka ku safraya wadada isku xirta gobolada Koofureed iyo gobolada dhexe.